Ngokuvamile abantu abakhulu ngempela abahlala bengabonwa umphakathi jikelele, futhi ukufaneleka kwabo ebuntwini kuhlale kwaziwa kuphela kumbuthano omncane wabantu. Zisebenza ngokuthobeka, kodwa azidingi lutho ngezinsizakalo zabo. Laba bantu bayabusiswa nguNkulunkulu, futhi kubo akukho inani eliphakeme kunomvuzo woPhezukonke. Ngezinye izikhathi ungathola inkaba, echaza impilo yobuntu obunjalo kusukela ezikhathini zasendulo. Kodwa abantu abanikeza bonke labo abadinga usizo nempilo bangatholakala esikhathini sethu. Isibonelo, i-herbalist yezindela, njengoba abaningi bembiza ngokuthi, owesifazane olula, wamsiza ukuba asindise izinkulungwane zezimpilo ngamandla akhe okuphulukisa nokukwazi imvelo.
I-biography yomuntu siqu
U-travnitsa waseMonastic - u-Elena Zaitseva - wazalwa emndenini wesigodlo saseSt. George Fedor Bossykh no-Evdokia Grigoryevna. Ubaba waboshwa ngesikhathi sokusungulwa kwamandla aseSoviet futhi wahlala iminyaka engu-11, ngemuva kwalokho, ngemuva kokubuya, wafa ekhaya ngokugula okukhulu. Emagxeni ka-Evdokia Grigorievna kwakukhona izingane ezingu-8: abafana abane namantombazane angu-4. Ukukhula kwabo kwakunzima, njengoba i-herbalist ye-monastic ikhumbula, kwakudingeka basebenze kanzima. Ukuze bahlale emzaneni waseNovo-Perelysevo esifundeni saseTula, basebenze epulazini elihlangene. Umndeni ka-Evdokia Grigorievna awuzange unikezwe umholo, ngoba babhekwa ngokuthi "izitha" zabantu, kodwa babhala amanothi futhi ekupheleni kwenyanga bavumela ama-200 g okusanhlamvu noma ufulawa.
Kodwa-ke, izingane azizange zihlupheke, njengoba umama wabo azi izindlela eziningi zokudla umndeni wakhe. Wayewazi "izimfihlo" zemvelo, wayenolwazi mayelana nezitshalo eziwusizo nezimpande zomsoco. Kusukela kumama wakhe, i-herbalist ye-monastic izuze ulwazi namakhono okuphulukisa. U-Evdokia Grigoryevna wayengabhaka isinkwa esimnandi noma aphuze ikhofi elimnandi, esebenzisa kuphela lezo zitshalo ezazungeze indlu nasensimini.
Kuyakwazi ukuphawula ukuthi, naphezu kwezikhathi ezinzima (futhi kwakudingeka bakhuthazelele impi yeminyaka), unina akazange akhulume lutho kwabanye. Waphulukisa amanxeba aqinile amasosha, wabondla emithonjeni yabo, wasindisa abaningi ezifweni ezidabukisayo ze-typhus ne-dysentery ngaleso sikhathi.
Isiphetho sika-Elena Feodorovna sasimangalisa. Nakuba ayefundiswe eMoscow Architecture and Construction Institute futhi wasebenza okhethekile iminyaka engaba ngu-50, akukho lutho olwamvimbela ekuthuthukiseni ikhono elikwazi ukuphulukisa. Esebenza esikhungweni sezindiza, i-herbalist ye-monastic yahlangana nomkakhe wesikhathi esizayo, owadala naye umshado ojabulisayo. Babenendodakazi, uLyudmila.
U-Elena Fyodorovna waqoqa ulwazi lwakhe kancane kancane, ehlezi emitatsheni yamabhuku, lapho ebhala khona imiyalelo yokuphathwa kwemithi. Futhi i-herbalist ye-monastic yahamba kakhulu kuyo yonke indawo yesikhala esivele se-post-Soviet. Uhambisa ulwazi lwakhe ezinkulumweni nasezinkomeni ezigcinwe emasontweni ase-Orthodox. I-herbalist u-Elena Fedorovna wathola idiploma yakhe ngo-1987 futhi kusukela ngaleso sikhathi waqala ukusebenza njengomphilisa ngokusemthethweni.
I-travnitsa yaseMonastic, i-Zaitseva Elena Fedorovna, icebisa ukungathathi amalungiselelo amakhemikhali, kodwa ukuthembela emvelweni ohlakaniphile. Ngokusho kwakhe, uNkulunkulu unikeza zonke iziguli indlela yokuphulukisa ezinyaweni zakhe, udinga nje ukubheka eduze. Ngakho-ke, endlini lapho umuntu ophethwe umdlavuza noma izifo zesikhumba ehlala khona, ungabona ukuthi i-celandine ikhula kanjani. I-burdock, "ehlala" cishe yonke indawo, iyisiluleko sezo zonke izifo.
Awukwazi ukulahla ukhula (njengoba sicabanga) utshani, kufanele luqoqwe futhi lusetshenziselwe ukupheka, ukwenza ama-broth nezinye. Isibonelo, isitshalo "mocryca" singasetshenziswa esikhundleni seklabishi. Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuba ube nesethi yamagilebhisi endlini: inambuzane, i-St John's wort, i-chamomile ne-spray. Lezi zidakamizwa zizosiza ngezifo ezihlukahlukene.
Akuwona umqondo omubi ukulungisa izimpande ze-burdock ne-coppy ekuqaleni kwentwasahlobo futhi zenze ama-broths avela kubo. Le mithi yokwelapha ingaphilisa isifo sofuba, ukushisa, ukukhubazeka, i-internetical hernia, ukushisa, izifo zesikhumba. Ukuze wenze lokhu, kuyadingeka ukumba izimpande ze-burdock, ugeze kahle, uthathe izingxenye futhi ume. Enye i-spoonful enkulu ye-billet eyomile uthele amanzi abilayo (2 izinkomishi) bese ubeka ipuleti (ubilise imizuzu engaba ngu-10). Decoction emva kwamahora angu-2 bese udla ngaphambi kokudla (imizuzu engu-15) ngo-100-150 ml.
Ulwazi lwe-herbalist yezindela, u-Elena Fedorovna, luyigugu futhi luyadingeka ikakhulukazi esikhathini sethu. Amandla emvelo akanayo imingcele, akwazi ukuphulukisa noma yiziphi izifo nokuphazamiseka. Ukuze senze lokhu, sidinga kuphela ukunakekelwa kwemvelo, futhi hhayi ukuxosha eceleni ingcebo esinayo ngaphansi kwezinyawo zethu.